ဖာတီပွေးပုံက ရဲဖမျးလို့ပွေးရတဲ့ ခိုးဝငျလူမညျးတှလေိုပဲလို့ ပွောခဲ့လို့ တရားစှဲခံရတော့မယျ့ သတငျးဌာန - Shwe Soccer
ဘာစီလိုနာရဲ့ ကွယျတဈပှငျ့ဖွဈပွီး စပိနျလကျရှေးစငျ စီနီယာအဆငျ့ကို အသကျ (၁၇) မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ဖာတီ အတှကျ အရာရာက လှပပွညျ့စုံနသေညျ့တိုငျ မီဒီယာကတော့ အကညျြးတနျရုပျဆိုးတဲ့ညနခေငျးတဈခုကိုဖနျတီးလိုကျပွနျပါတယျ။ဘာစီလိုနာ အသငျးရဲ့ ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ အဖှငျ့ပှဲစဉျမှာ ဖာတီက သှငျးဂိုးတဈဂိုးရယူခဲ့သလို ခွစှေမျးပွကစားခဲ့တာကွောငျ့ ပှဲအပွီး ရဗြူး ပွနျရေးမှာ ဖာတီ ရဲ့ခွစှေမျးကိုခြီးကြုးရငျးလကျလှနျသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ABS news လို့အမညျရတဲ့ သတငျးဌာနက‌တငျပွခဲ့တာဖွဈပွီး စပိနျအားကစားကောငျစီ အဖှဲ့ဝငျလညျးဖွဈတဲ့ ဂြာနယျလဈကရေးသားခဲ့တာကွောငျ့ ဘာစီလိုနာအသငျးဖကျကအတျောလေးဒေါသထှကျနပွေီး ယနေ့ ဥပဒကွေောငျးအရ ဖွရှေငျးမယျလို့ဆိုပါတယျ။ ဘာစီလိုနာ လူငယျတိုကျစဈမှုးဖာတီ ရဲ့ပွေးအားကို အဆိုပါသတငျးဌာနကဖျောပွခဲ့ရာမှာ “ခိုးဝငျတဈယောကျ ရဲတှလေို့ ပွေးသလိုပဲ” လို့တငျစားခဲ့ပွီး ဖာတီ ကို စပိနျလူမြိုး စပျ ဖွဈတာကွောငျ့ လူမြိုးရေးအရခှဲခွား တဲ့အသုံးနှုနျးကို အသုံးပွုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဖာတီက ပျေါတူဂီ မိဘကနဆေငျးသကျလာသူဖွဈပမေယျ့ စပိနျ‌မွကေို ရောကျရှိနတော ကွာမွငျ့ပွီဖွဈပွီး လကျရှိစပိနျစီနီယာ ကစားသမားဘဝကိုဆယျကြျောသကျမှာရရှိထားသူလညျးဖွဈပါတယျ။ပျေါတူဂီအသငျးက ကိုယျစားပွုဖို့ကမျးလှမျးခဲ့ဖူးပမေယျ့လညျးဖာတီက စပိနျအတှကျသာ ကစားပေးခဲ့ပမေယျ့ စပိနျရဲ့ အစှနျးရောကျမီဒီယာ‌တှကေတော့ လူငယျကစားသမားလေးကို ပွဈမှတျထားလာဟနျရှိပါတယျ။
BARCELONA, SPAIN – SEPTEMBER 27: Ansu Fati of FC Barcelona celebrates with teammates after scoring his sides second goal during the La Liga Santander match between FC Barcelona and Villarreal CF at Camp Nou on September 27, 2020 in Barcelona, Spain. Football Stadiums around Europe remain empty due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in fixtures being played behind closed doors. (Photo by David Ramos/Getty Images)
အဆိုပါသတငျးဌာနက စပိနျအစှနျးရောကျဖကျဆဈ သတငျးဌာနအဖွဈနာမညျကွီးပွီး စပိနျလူမြိုးရေးပွငျးထနျတဲ့ အဖှဲ့စညျးတဈခုဖွဈတယျလို့ မီဒီယာတှကေဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ။ဘာစီလိုနာ အသငျးဖျော ဂရဇျမနျးကတော့ အဆိုပါ သတငျးကို ကူးယူဖျောပွပွီး ဖာတီလို လူငယျကစားသမားကို ယခုလိုမစှပျစှဲကွဖို့ လူမှု့ကှနျရကျကနသေတိပေးခဲ့ပါသေးတယျ။ဘာစီလိုနာကတော့ အသငျးရှနေ့တှေကေနတေဈဆငျ့ အဆိုပါဖွဈရပျကို ဥပဒကွေောငျးအရ ကိုငျတှယျသှားမှာဖွဈပွီး သူတို့ရဲ့အနာဂတျကွယျပှငျ့အတှကျ ဖကျဆဈမီဒီယာ အဖှဲ့စညျးကို တရာစှဲဆိုသှားမယျလို့ဆိုပါတယျ။
ဘာစီလိုနာရဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်ပြီး စပိန်လက်ရွေးစင် စီနီယာအဆင့်ကို အသက် (၁၇) မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ဖာတီ အတွက် အရာရာက လှပပြည့်စုံနေသည့်တိုင် မီဒီယာကတော့ အကျည်းတန်ရုပ်ဆိုးတဲ့ညနေခင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ဖာတီက သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးရယူခဲ့သလို ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့တာကြောင့် ပွဲအပြီး ရဗျူး ပြန်ရေးမှာ ဖာတီ ရဲ့ခြေစွမ်းကိုချီးကျုးရင်းလက်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ABS news လို့အမည်ရတဲ့ သတင်းဌာနက‌တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး စပိန်အားကစားကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဂျာနယ်လစ်ကရေးသားခဲ့တာကြောင့် ဘာစီလိုနာအသင်းဖက်ကအတော်လေးဒေါသထွက်နေပြီး ယနေ့ ဥပဒေကြောင်းအရ ဖြေရှင်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ လူငယ်တိုက်စစ်မှုးဖာတီ ရဲ့ပြေးအားကို အဆိုပါသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ရာမှာ “ခိုးဝင်တစ်ယောက် ရဲတွေ့လို့ ပြေးသလိုပဲ” လို့တင်စားခဲ့ပြီး ဖာတီ ကို စပိန်လူမျိုး စပ် ဖြစ်တာကြောင့် လူမျိုးရေးအရခွဲခြား တဲ့အသုံးနှုန်းကို အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဖာတီက ပေါ်တူဂီ မိဘကနေဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပေမယ့် စပိန်‌မြေကို ရောက်ရှိနေတာ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိစပိန်စီနီယာ ကစားသမားဘဝကိုဆယ်ကျော်သက်မှာရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီအသင်းက ကိုယ်စားပြုဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ဖူးပေမယ့်လည်းဖာတီက စပိန်အတွက်သာ ကစားပေးခဲ့ပေမယ့် စပိန်ရဲ့ အစွန်းရောက်မီဒီယာ‌တွေကတော့ လူငယ်ကစားသမားလေးကို ပြစ်မှတ်ထားလာဟန်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါသတင်းဌာနက စပိန်အစွန်းရောက်ဖက်ဆစ် သတင်းဌာနအဖြစ်နာမည်ကြီးပြီး စပိန်လူမျိုးရေးပြင်းထန်တဲ့ အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဘာစီလိုနာ အသင်းဖော် ဂရဇ်မန်းကတော့ အဆိုပါ သတင်းကို ကူးယူဖော်ပြပြီး ဖာတီလို လူငယ်ကစားသမားကို ယခုလိုမစွပ်စွဲကြဖို့ လူမှု့ကွန်ရက်ကနေသတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဘာစီလိုနာကတော့ အသင်းရှေ့နေတွေကနေတစ်ဆင့် အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို ဥပဒေကြောင်းအရ ကိုင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကြယ်ပွင့်အတွက် ဖက်ဆစ်မီဒီယာ အဖွဲ့စည်းကို တရာစွဲဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Previous Article ဆှဈဇာလနျနောကျခံလူ ကို ချေါယူဖို့ ယူနိုကျတကျ နဲ့အပွိုငျဖွဈလာတဲ့ ခယျြလျဆီး ၊ မနျစီးတီး
Next Article ဘယျလိုပဲပွောပွော ဗီဒဈက ဗနျဒိုကျထကျသာတယျလို့ ပရိသတျတှေ ရှေးခယျြခဲ့